Hordhac: Tottenham vs Juventus – Juve Oo Shaqo Adag Laga Rabo & Spurs O Xeelad U Baahan %
Hordhac: Tottenham vs Juventus – Juve Oo Shaqo Adag Laga Rabo & Spurs O Xeelad U Baahan
By Laacib News	 On Mar 7, 2018
Kooxda kubada cagta Juventus, ee ka dhisan wadanka Talyaaniga ayaa waxay soo booqan doontaa dhigeeda Tottenham, garoonkeeda si ay ula dheesho ciyaar ka tirsan lugta labaad ee wareega 16-ka koobka Dhaga-weyn ee UCL.
Lugtii hore oo lagu dheelay garoonka Juve ayaa waxay kusoo kala baxeen labadaan kooxood Bareejo 2-2 ah, taasoo ka dhigan in Juve looga baahan yahay inay shaqo adag ay qabato, ayna dhaliso goolal.
Bareejo kasta marka laga reebo 2-2, waxaa kusoo baxaysa kooxda reer England, ee Tottenham, iyadoona naadiga Marwadda Duqda looga fadhiyo inay raadiso goolal ayna shabaqa qeeda ilaashato.
Kooxda macalin Mauricio Pochettino, ayaa waxay heli kartaa ciyaartaan saf xoog leh, maadaama aysan jirin wax ciyaaryahano oo waa weyn, kaasoo ciyaartaan shaki laga gelinayo ama dhaawac ku maqan.
Kaliya daafaca dambeedka buuxa ee Toby Alderweireld, ayaa wuxuu yahay mid haawac ku seegi doona, laakiin waxaa tababarka kusoo laabtay Jan Vertonghen, kaasoo bedalkiisa geli kara ciyaaryahan Alderweireld.
Laakiin, macalinkaan reer Argentina ee Spurs, hogaamiya waxaa haysata Jah-wareer dhanka kala xulashada ciyaartoydiisa, kaasoo ku saabsan Son iyo Lamela isagoona tix-gelin mid walba wax qabadkiisa.
Dhanka kale, kooxda Old Lady ayaa waxay tahay mid ciyaartaan uusan kasoo muuqan doonin ciyaaryahan Higuain, kadib dhaawac soo gaaray ciyaartii ay Arbacadii hore ay uga soo badiyeen 1-0, dhigooda Lazio.
Sidoo kale, waxaa Juve ka maqnaan doona ciyaartoyda kala ah: Bernadeschi, Cuadrado iyo De Sciglio, dhamaantoodana waa kuwa dhaawacyo kala duwan ku maqan, islamarkaana saalada Qaliinka ee kooxdooda la saaran.
Kulanka: Tottenham vs Juventus
Saacadda 10:45 [Caweysnimo, Waqtiga Geeska Afrika]
Champions LeagueTottenham vs Juventus
Hordhac: Man City vs FC Basel – Sky Blues Oo Ay Lug Kula Sii Jirta Wareega Sideed Dhamaadka
Hordhac: Barca vs Espanyol – Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay Final-ka Catalan Super Cup